Jawaab: Difaaca Kofi Annan - UN
Halyey Kofi Annan in la casilo iyo in jail la dhigo uma qalmo | Osman
Waa arrin laga naxo qof soomaali ah oo difaacaya UN iyo Kofi Annan. Marka hore waxba nagama gelin oo annaga ayaaba teena nahaysata. Dawladeenii sidaan u ridnay dawlad la'aan na haysa oo wakaas dadkeenii isku dilayaan meel kasta haba ugu danbayso Gelinsoor. Marka maba dhex geli karno UN iyo USA teena ayaa nahaysata.
Tan labaad UN waa tee sowtii ay dhisteen reer galbeedka maahan inay danahooda ku ki ilaashadaan. Sow tii dhacday lacagtii reer ciraaq oo caruurta reer ciraaq macluul u dhamaysey maahan
Sow tii magaceed loo adeegsan jiray qayaanooyinka iyo xaq darada maahan.
Sow tii u diiday Madaxweynaha Soomaaliya A/laahi Yusuf inuu af soomaali ku hadlo maahan oo ku qasabtay inuu Ingriisi ku hadlo maahan sow tan yaseysa afkeena hooyo maahan
Sow tan corruptionka iyo masuqmaasuqa wado maahan saw tan ilma iska soo tuurka fidisa maahan. Kofi sow madax kama ahayn. Sow ma ogolaan jirin weeraradii sharci darada ee Clinton iyo Tony blair ku qaadi jireen ciraaq maahan. saw tan lagu qaraabto maahan UN iyo Kofi.
Soman Abwaanow afkaaga ka ilaali Wardere iyo senatoorka Coleman kuwaasoo u adeega Soomaalida Minnesota.
UN iyo Kofi in la baaro waa u qalmaan waa tuugo.